Ọ bụ ezie na anyị na-elekwasị anya na atụmatụ dị iche iche maka ndị ahịa anyị, anyị na-agba ha ume mgbe niile ịga nzukọ ogbako na ngosipụta azụmahịa. Ihe ngosi ahia nwere mmetuta di egwu na iwulite mmata nke ika gi ya na ndi na - ege gi nti bu ihe kwesiri ka ichoputa ihe ha choro karia ndi obia n’enye gi. N'ezie, 81% nke ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa nwere ikike ịzụ ihe na 99% nke ndị ahịa hụrụ uru ịnọ ebe ahụ
agba - jiri agba ndị na-akpali omume na ị na-achọ ndị na-egosi ahịa ahịa.
Space - ọkọlọtọ gị, ntanye ihu, yana njigide nke ọma na n'ihu ọha kama ị ga-etinye ọtụtụ ozi achọpụtara.
M ga-agbakwunye otu ndụmọdụ ọzọ… chọpụta ókè ị ga-esi nwee ebe ogbako ma jiri ohere n'elu ụlọ ndò gị. Otutu ebe ogbako na-enye ohere itinye ihe ngosi nke ìhè nke ụdị - nke nwere ike ịbụ nnukwu uru na nnukwu ụlọ nzukọ. Ihe omuma nke Losberger, Ihe mere eji egosi ahia dị mkpa maka azụmaahịa gị, na-agụnye ụkpụrụ dị na UK, usoro nchekwa, ụdị ụlọikwuu ihe omume na ụlọ ntu, uru maka owuwu oge, na ndụmọdụ nkwadebe ndị ọzọ!